Ny fampiharana podcast an'i Google dia manampy ny bokotra Cast amin'ny fizarana izay lalaovinay | Androidsis
Ny fampiharana podcast an'i Google dia manampy ny bokotra Cast amin'ny fizarana izay lalaovinay
Google dia iray amin'ireo lehibe indrindra izay tato ho ato tsy nisy fanatrehana izany teo amin'ny tontolon'ny podcast. Tsy nisy ny sehatra misy azy na ny fampiharana natokana ho azy, izay nanery ny mpampiasa hisafidy ny rindranasa sy ny serivisy an'ny antoko fahatelo.
Soa ihany, roa taona lasa izay izay niova, niova ho tsara kokoa amin'ny sehatra podcast sy fampiharana izay tsy misy tokony hitsiriritra ny fifaninanana na amin'ny rindranasa hafa dia tsy misy amin'ny iOS roa (misy Google Podcast) sy Android. Lavitra ny fahafaham-po, Google dia mbola manohy manampy andraikitra vaovao amin'ny fampiharana azy.
Ankafizin'ny ankamaroan'ny mpampiasa ny podcast malalany mivantana avy amin'ny finday avo lenta rehefa handeha hiasa izy ireo, mankany amin'ny ivon-toeram-pianarana, raha manao raharaha ao an-trano dia miasa ...
Raha any an-trano isika, ary manana ny fotoana mety, dia mahazo aina kokoa izany henoy ny podcast malalantsika miaraka amin'ny mpandahateny. Na dia marina aza fa ny Google Podcast dia manolotra saika hatramin'ny nanombohany bokotra natokana handefasana, miaraka amin'ny fanavaozana manaraka dia hanova ny toerana misy azy io eo am-baravarankely playback an'ny podcast henontsika, hisolo ny kisary fampahalalana podcast.
Ny kinova ankehitriny an'ny fampiharana podcast Google dia nampiseho an'ity bokotra ity amin'ny zoro ankavia ambony amin'ny efijery, bokotra iray izay nandehananao namaky ireo fizarana samihafa natolotry ny fampiharana dia nanjavona ary tsy nipoitra intsony raha tsy naverinay ny fampiharana.
Ny fipihana eo amin'ny bokotra Transmit dia hampiseho ireo fitaovana mifanentana rehetra ahafahantsika mitarika ny audio podcast. Ny kinova an'ny Google Podcast izay manova ny toerana misy ny bokotra Cast azo alaina ny alalan ' ity rohy mankany amin'ny Play Store ity ary lasa ampahany amin'ny programa beta Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana podcast an'i Google dia manampy ny bokotra Cast amin'ny fizarana izay lalaovinay
Ahoana ny fampidinana sy fametrahana ny fonosana PUBG Mobile 1.0 Global Version OBB